Sawirro: Socodka Mowliidka ee Gaalkacyo oo noqday mid aan horay loo arag – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Socodka Mowliidka ee Gaalkacyo oo noqday mid aan horay loo arag
Mareeg.com: Kumanaan dadweyne ah oo u badnaa culuma’udiin, xer cilmi iyo ardayda dugsiyada waxbarashada ayaa shalay xus ballaaran u sameeyey dhalashada Nabigeenna Muxamed Nabadgelyo iyo Naxariis Korkiisa ha ahaadaanee.
Dadka ka qeyb galay xuskaan qaabka banaanbaxa ah loo dhiagay ayaa iyagoo xiran qamiisyo cad cad iyo cimaamado socod dheer ku maray wadooyinka magaalada Galkacyo qaarkood iyagoo qaadayay qasiidooyin Nabi amaan ah iyo Saliga Nabigeenii Maxamed (NNKH).
Qaar ka mida culum’udiinkii ka qeybgalay banaan baxaan oo iyagu qudbado kasoo jeediyay fagaaraha weyn ee Sheekh Axmed Sheekh Yuusuf Jimcaale (Sheekh Ilka Dahab) oo ay kusoo gaba gabeeyeen dibadbaxooda ayaa ka sheekeeyay fadliga ay leedahay weeynaynta maalintii iyo bishii uu dhashay Nabigeena Muxamed ah Nabadgalyo iyo Naxariisi korkiisa ha ahaatee.
Gudoomiyaha Maxkamada sare ee maamulka Galmudug, Sheekh Axmed Sheekh Yuusuf Jimcaale (Sheekh Ilka Dahab) oo isna ka hadlay madasha lagu soo gunaanaday dibadbaxaan loogu dabaaldagayay dhalashada nabigeeni Muxamed (NNKH) ayaa khudbad dheer oo uu halkaasi ka jeediyay kaga hadlay arimo farabadan oo ay ka mid ahayeen colaadaha ka jira, wuxuuna ku baaqay in la joojiyo.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa meelo kala dwuan oo ka mid ah Soomaaliya lagu qabanayey weynneynta dhalashada Nabigeenna Muxamed ah (NNKH), maadaama lagu gudajiro bisha uu dhashay ee Rabbiicul-Awal.
Xildhibaano: Afar wasiir ma aqbali doono mana ugu naxariisan doono RW Cumar Cabdirashiid!
Farmaajo: Xukuumada cusub waxaa lagu dhisay dan gaar ah waana niyad-jab